I-Luxury 3 ibhedi ye-ac flat kwi-Pratapgunj Society - I-Airbnb
I-Luxury 3 ibhedi ye-ac flat kwi-Pratapgunj Society
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguMitali
Iibhedi ezi-3, iiflethi ezi-2 zokuhlambela kwisakhiwo esitsha kraca, esingabanini bethu, kanye ngakwi-Kamati Gardens. I-elevator kwisakhiwo. Le flethi ibonelela ngokulula ukuba kufutshane neendawo zokuthenga kunye neeresityu eFatehgunj naseSayajigunj, ngelixa ikwindawo yokuhlala ezolileyo. Sinikezela ngamagumbi okulala amathathu e-ac, ikhitshi, indawo yokuhlala, indawo yokupaka kunye namagumbi okuhlambela amabini. Le yindawo efanelekileyo ye-NRIs, abahambi bezoshishino, iintsapho. Izixhobo ze-LG. Ukucoca imihla ngemihla ekhoyo (eyongezelelweyo).
Sineefestile ezinkulu zokukhanya, kunye needrapes zabo bakhetha ukukhanya okuncinci. Iindawo eziqhelekileyo zicocwa yonke imihla.
Onke amagumbi okulala amathathu anesimo somoya; kuya kunikwa amalaphu ebhedi.
Indawo yokupaka iyafumaneka kwisakhiwo nakwisitalato.
Iibhedi ezikhululekileyo zokuphumla kwindawo yokuhlala, kunye ne-wifi kunye nentambo ye-Tata Sky ikhona kumabonakude wakho we-LG.
Ikhitshi ine-microwave, i-Arro yamanzi, ifriji kunye negesi, kunye nesethi yesiseko sempahla. Izixhobo ze-LG.
Simi ngaphakathi kwe-1.5 km yesikhululo sikaloliwe, malunga nesiqingatha sekhilomitha ukusuka kwisikhululo sebhasi, kwaye ngaphakathi kwe-250m ye-Kamati gardens. I-MSU ikwelinye icala. Iivenkile ezinkulu, iivenkile zokutyela, iivenkile eziluncedo zingaphantsi kwemizuzu emi-5 kude.
Indawo elungele abahambi ngeenyawo nayo.
Ukulahlwa kwenkunkuma yonke imihla (kubandakanywa).
Sinikezela nge-ayina yonke imihla kunye neenkonzo zokucoca (ezongezelelweyo). Ngokuqhelekileyo iflethi icocwa kuphela xa kutshekishwa kwaye kujongwe; kwaye kanye ngeveki.
Ityala elikhanyayo / umbane ohlawulelwa undwendwe; sithatha ifoto yeemitha ukuze sifunde kwaye sibale nge-Rs 7 ngeyunithi nganye, nto leyo yinkampani eluncedo esihlawulisa yona.
4.95 · Izimvo eziyi-39
Indawo ezolileyo enemithi kunye nabahambi ngeenyawo; imizuzu embalwa ukusuka kwezinye iindawo zokutyela ezilungileyo, iindawo zokuthenga edolophini. Eyona paki/yegadi inkulu, Kamatibaug isecaleni komnyango.
Umbuki zindwendwe ngu- Mitali
Sihlala kwisakhiwo, kwaye siyayihlonipha imfihlo yeendwendwe. Izitshixo ziya kunikwa xa ufika.